Uyazisola umculi owaphelelwa wudumo esejola noBen 10 | News24
Uyazisola umculi owaphelelwa wudumo esejola noBen 10
Durban - UNtokozo Masinga uthi isahluko somjolo wakhe noMsawawa akasiphuphi ngisho elele.
Uthi ukuba kuya ngaye ngabe akwenzekanga ukuba bajole futhi uthi akazi nokuthi yayiqale kanjani.
"Ngiyazisola kakhulu ngalobu budlelwano ngoba bangehlisa isithunzi, baphoxa nabantu abaningi ababesondelene nami okubalwa kubo umndeni, nabalandeli bomculo wami," kusho uNtokozo.
Uqhuba watshela ILANGA LangeSonto ukuthi kuningi okonakala empilweni yakhe ngesikhathi ejola nalo mculi.
"Ngiyazi ngibe nawo amaphutha kulo mkhakha (womculo), ngaphoxa nabantu abebengithembile okubalwa noMdu Ngcobo ofana nobaba kimina emculweni. Kodwa kukho konke akukho okwedlula okokujola noMsawawa," kuqhuba uNtokozo, engeza ngokuthi ukube kuya ngaye ngabe akakhulumi nokukhuluma ngalobu budlelwano.
Ukujola kwalaba baculi kuphenduke undabuzekwayo cishe ngowezi-2009 kwazise uNtokozo ubemdala kunoMsawawa. Nabo bebengakufihli ukuthandana kwabo njengoba bebebonakala emicimbini eyahlukene, kucaca ukuthi bangamathe nolimi. Ngaleso sikhathi futhi bobabili bebengaphansi kwenkampani iTouch Africa.
UNtokozo ubonakale okokuqala e-Unique Lifestyle Cafe ngeSonto ngemuva kweminyaka emihlanu enyamalele kulo mkhakha. Kulo mcimbi bekuhlonishwa uMdu Ngcobo ongumnikazi weTouch Africa futhi osevundulule inqwaba yabaculi okubalwa naye uNtokozo. Uqhulule amanoni aduma ngawo okubalwa esihloko sithi "All I Need" nethi "Hello".
Udalule ukuthi usekhuza ibuya emculweni futhi esekhulile. Uthi kuphoqeleke ukuba aqale axolile kuNgcobo ngaphambi kokuba amamukele futhi njengoba esazoqhubeka nokusebenza neTouch Africa.
OLUNYE UDABA:ISundowns iyohlale iyikhaya kumina - Ben 10
"Baningi abantu engiqale ngaxolisa kubona kanti namanje ngisaxolisa kakhulu kubalandeli bami ngakho konke engikwenzile ikakhulukazi okomjolo. Ngifundile kulesi senzo njengoba singasophinde senzeke," esho.
Uthi okwamanje akajoli namuntu kodwa uzithandela indodakazi yakhe athi isho lukhulu kuyena.
Ngakolunye uhlangothi uMsawawa wenqabile ukuphawula ngokujola kwakhe nalo mzwilili.
"Akukho engizokuphawula okuthinta uNtokozo, ngiyaxolisa," eshaya ngamafuphi.